Cali Dheere: Wixii xoog lagaaga qaato laguma soo ceshado wax aan awood ahayn – Hornafrik Media Network
Cali Dheere: Wixii xoog lagaaga qaato laguma soo ceshado wax aan awood ahayn
Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere), Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab, ayaa si kulul kaga hadlay tallaabada Mareykanka uu Magaalada Qudus ugu aqoonsaday Caasimadda Maamulka Israel.
Afhayeenka, ayaa war uu soo saaray ku sheegay in tani ay muujineyso cadaawada uu Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump u qabo Islaamka iyo Muslimiinta.
Afhayeenka Guud ee Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu Muslimiinta ugu baaqay in ay dhulka barakeysan ee reer Falastiin ka difaacaan Yahuudda iyo Mareykankaba.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan Muslimiinta in ay hubka qaataan oo Masjidka Barakeysan ee Al Aqsa ay ka difaacaan gumeysiga Yahuudda ee Mareykanku taageerayo. Wixii xoog lagaaga qaato laguma soo ceshado wax aan awood ahayn.” Ayuu yiri Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere).
Donald Trump, Madaxweynaha Mareykanka, ayaa amray in Safaaradda Mareykanka laga raro Magaalada Tel Aviv, loona wareejiyo Magaalada Qudus, taasoo ka careysiisay dunida Muslimka.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, ayaa ku baaqay shir inay isugu yimaadan dowladaha ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka, maalinta Arbacada, si looga hadlo go’aanka Xukuumadda Washington ee Magaalada Qudus.
Sharci dejiye-yaasha Mareykanka, ayaa sanadkii 1995-kii saxiixay sharci Dowladda Mareykanka u ogolanaya inay Safaaradeeda Israel u wareejin karto Magaalada Qudus, ha yeeshee tan iyo xilligaa Madaxweyne-yaashii Mareykanka soo maray ay dib u dhigi jireen fulinteeda.
Booliska Kenya Oo Toogtay Nin Ay Uga Shakiyeen Falal Argagaxiso